June 11, 2009 at 4:41 at the
lapho ukulanda it?? I Cant ukuthole yimuphi isixhumanisi thwebula?
Le nguqulo usebenza emihle nge WP 2.7.1 futhi.
One tweak omncane kungaba mnandi, isixhumanisi kuya transposh.org in the widget kufanele bavule ewindini elisha (libhekise = _blank).
Ngingakwazi ukuyenza, kodvwa angifuni ukuba lokudlela ngekhodi yakho.
June 17, 2009 at 9:08 at the
I abafake lokhu engosini I ukugcina futhi waphula NextGen Gallery, kanye, Yaqala iphutha ekhasini blog njengoba ekhaya nakuba ngase wadala ikhasi static ikhaya basisebenzisa izilungiselelo ngaphansi Funda.
Oh, Ngithathe ukunxusela WP 2.8.
Thanks. Ngizozama futhi, mhlawumbe nge config ezahlukene, njengoba ubukeka omkhulu.
June 17, 2009 at 9:09 at the
Sicela uzame ivimbele okulotshiwe at inketho ngezansi, ungazise uma lokhu fixes it
Kuvele iphutha, okuyinto cishe lisho feed lehlile. Zama futhi emuva kwesikhathi.